Inona ny fiarovan-doha lacrosse ahazoana aina indrindra? - Fiarovan-Doha
Tena > Fiarovan-Doha > Ny fiarovan-doha lacrosse mahafinaritra indrindra - ny mpitari-dalana farany
Ny fiarovan-doha lacrosse mahafinaritra indrindra - ny mpitari-dalana farany
Inona ny fiarovan-doha lacrosse ahazoana aina indrindra?
Ilay zokiolona tsara indrindraLacrosse Helmets
Cascade S - Ny azo antoka indrindraLacrosse Helmetary BestLacrosse HelmetHo an'ny fikorontanana.
STX Rival - Mety tsara indrindraLacrosse Helmet.
Warrior Burn -indrindrazava-baovaoLacrosse Helmet.
Cascade CPX-R - Tetibola / sanda tsara indrindraLacrosse Helmet.
Ireo mpilalao NFL amin'ny ankamaroan'ny ekipa rehetra dia mizaha karazana fiarovan-doha vaovao: iray namboarina tamin'ny fanaovana pirinty 3D. Ny zava-drehetra eto dia mihodina manodidina izay ao ambanin'ny akorandriaka. Antsoina hoe ilay Diamondra Riddell SpeedFlex Precision.
Momba ny fiarovana lavitra ho an'ny atleta. afaka manaparitaka sy misitrika ny angovo vokadrany. Ny pirinty vita amin'ny karbaona any Silicon Valley dia mametaka pad resin izay tafiditra ao anaty fiarovan-dohan'ny mpilalao tsirairay mifototra amin'ny scan an'ny lohan'izy ireo.
Ireo no pad avy amin'ny scanako izay raisintsika tsirairay avy ary halefanay any amin'ny Riddell izany ary hanangana fiarovan-doha farany amin'izany izahay ary hahazoako mamely loha amin'ny hafa ao amin'ny ekipa. Ny sombin-javatra dia mety ho zavatra taloha, toy ny fiarovan-doha vita amin'ny hoditra malefaka izay nipoitra voalohany efa ho 100 taona lasa izay Taona maro lasa izay tamin'ny fanatanjahan-tena, raha toa ka foam io dia tsy maintsy manana karazana sombin-javatra isan-karazany ianao ary mila mametaka azy toy ny piozila. Mavesatra be amin'ny asa ary tsy mifankahazo tsara ny angovo amin'ny lafiny iray.
Miaraka amin'ny vokatra mitambatra, afaka mahazo fiarovana tsara kokoa ianao amin'ny fananana tsy mitovy amin'ny faritra. Ary izany, indrindra rehefa ampiarahina amin'ny volon'ny lohanao, dia izany indrindra no ilainao hanatsarana ny fiarovana. Ny lohan'ilay mpilalao dia nojerena amin'ny rindrambaiko noforonin'i Riddell.
ThenCarbon dia mamolavola sy manonta pad fito mahazatra miaraka amina lamina tsy manam-paharoa. Ka rehefa manery grilila ianao dia mifoka angovo isaky ny mitanondrika sy miforitra ny strut. Safidy lehibe tokoa ity rehefa manao fiantraikany hanaparitahana azy ianao ary handraoka izany angovo rehetra izany ary hanao vokatra azo antoka kokoa, mafy orina sy malefaka any amin'ireo faritra samihafa ilain'ny mpilalao izany mifototra amin'ny tena endrik'ilay lohany, Peyton Manning dia efa naneho hevitra teo aloha fa tena mahazo aina ry zareo ary faly be izy fa tonga lafatra ho an'ny lohany ny mety ary mahafinaritra ny mahita atleta toa izao izay tena mahatakatra ary maro amin'ny asany no nanandrana fiarovan-doha samy hafa.
Ny mpilalao NFL dia afaka misafidy modely amin'ny fiarovan-doha hataon'izy ireo, ary i Carbon dia nilaza fa maherin'ny 50 no te hanandrana an'ity modely ity. Mpilalao iray isaky ny ekipa NFL farafaharatsiny no nanao fiarovan-doha Riddell Speed ​​Flex Precision Diamond nandritra ny fiofanana sy lalao nandritra ny tapany faharoa tamin'ny vanim-potoana. Mpilalao teo aloha, Brent Jones avy amin'ny 49ers, dia tia ny endrika amam-bika ka mpamatsy vola ankehitriny.
Ny tampon dia vita pirinty ao amin'ny mpanonta printy L1 vaovao sy lehibe ary haingam-pandeha. Nilaza i Carbon fa 50 ka hatramin'ny 100 heny haingana kokoa noho ny fanontana 3D nentim-paharazana ny fizotrany ary afaka mampiasa fitaovana misy elastika sy tanjaka kokoa izy ireo. Izy io koa dia manao pirinty ny faladian'ny kiraro Adidas sy ny faritra ho an'ny atin'ny Ford Mustangs sy ny F-150.
Raha ny tantara no jerena dia maharitra herintaona sy sasany na roa taona vao afaka mitondra vokatra vaovao eny an-tsena. Efa nandia endrika an-jatony maro samihafa sahady isika. Ny fiarovan-doha dia avy amin'ny fotoana ilana maika ny fanavaozana ny fitaovana fiarovana.
Ny NFL dia nitatitra fikorontanana 214 tamin'ity vanim-potoana ity. Na dia nidina tamin'ny 281 aza io isa io tamin'ny vanim-potoana lasa teo, dia vao manomboka misongadina fotsiny ny loza ateraky ny kapoka miverimberina ao an-doha. Ny fanadihadiana iray namaky tany amin'ny Journal of theAmerican Medical Association tamin'ny 2017 dia nampiseho fa ny 99 isan-jaton'ny mpilalao NFL nohadihadiana dia naneho famantarana ny encephalopathy traumatic traumatic post-mortem, aretin-tsaina mihena izay misy fiatraikany lehibe amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra, ny fitsarana ary ny fahalalana.
proteinina ao amin'ny atody fotsy na yolks
Nalaza ratsy izany rehefa namono tena ny mpilalao NFL teo aloha Aaron Hernandez tamin'ny 2017 taorian'ny fanamelohana ho namono olona. Hitan'ny mpikaroka fa fony vao 27 taona i Hernandez dia nijaly tamin'ny trangana CTE ratsy indrindra hita tamin'ny olona latsaky ny 46 taona izy. Na dia tsy azo sorohana tanteraka aza ny fikotranana.
Manantena i DeSimone fa hanampy ny orinasany ny teknolojia. Betsaka ny ankizy tsy tafiditra amin'ny pro, sa tsy izany? Ary ny fiarovana azy ireo dia manan-danja toy ny atleta ambony indrindra, ary izany no antony itiavantsika fatratra ny hametraka ny tananay amin'ny teknolojia amin'ny ambaratonga lehibe kokoa. Ny NFL dia manao fikarohana any amin'ny laboratoara hanombanana izay satroka fiarovan-doha mety indrindra amin'ny fampihenana ny hamafin'ny fiantraikan'ny loha.
Tamin'ny taon-dasa dia natolotr'izy ireo ny toerana roa voalohany ho an'ny fiarovan-doha Zero1 avy amin'ny Seattle start-up VICIS. Mihetsiketsika sy ketrona izy io mba hakana ny vokany ary hiverina avy eo. Ny fikarohana NFL amin'ity taona ity dia hampiseho raha toa ka ny pirinty vita pirinty 3D amin'ny fiarovan-doha Riddell vaovao no mahatonga azy io ho azo antoka kokoa noho ny maodely hafa.
Tsy misy na inona na inona fantatra momba ny vidin'ny fiarovan-doha namboarina, fa hoy kosa i Riddell fa natao haharitra mandritra ny asan'ny mpilalao iray manontolo izy ireo. Ho azon'ny ekipa NFLand hovidiana izy ireo amin'ity taona ity. Ary manantena i DeSimone fa indray andro any dia azo ampiasaina hanam-pilaminana ireo atleta rehetra.
Azonao atao ny mieritreritra fanatanjahantena maro hafa: hockey gilasy, lacrosse, ski, miaramila, ary mpitandro filaminana ary mpampihatra lalàna. Mino izahay fa ny vokatra vita amin'ny bespeoke amin'ny heviny malalaka dia hisy fiatraikany lehibe. Ary mino izahay fa ny fitsaika dia ampahany manandanja amin'ny fanavaozana manaraka izay mitondra fiarovana.
Inona no mahasamihafa ny Cascade R sy S?
nySmety somary maivana kokoa ary manana tsiranoka tsara kokoa, nyRmanana fitongilana tsara kokoa, fampanjariana tsara kokoa, kely kokoa noho nyS, ary fiarovan-doha tena manodidina azy io. Tsy ampy nynynytsy fitoviananySary nyR ho an'nyizaho te-handany bebe kokoa amin'ny anS.
Misy teny vitsivitsy izay sarotra tononina fotsiny. Adinoy ny maha mpiteny tsy tompon-tany anao. Tsy azon'ny Amerikanina akory ireo teny ireo.
Androany dia handeha hihoatra ny 14 amin'ireo teny diso fampiasa matetika amin'ny teny anglisy amerikana isika. Nijery an'i Netflix aho tamin'ny andro lasa. Lahatsary fanadihadiana, Ugly Delicious Episode 2.
Ary nahita mpandahateny teratany nanonona teny diso tanteraka aho. Miala tsiny? Tena mila miverina aho ary mamadika ny dikanteny mba hahazoana antoka fa nilaza ny teny noheveriko fa nolazainy izy nefa diso ny fanononana azy. Ahoana izany? Ahoana ny fomba tsy fahitan'ny amerikanina ny teny amin'ny fiteniny? Izany dia satria mianatra teny isika indraindray amin'ny famakiana fa tsy amin'ny fihainoana ny fampiasana azy ireo.
Ary ny fiteny anglisy dia tsy fiteny fonetika. Ireo litera dia tsy mifanaraka amin'ny feo tsirairay. Ka afaka mahita teny iray isika ary maminavina ny fanononana ary angamba diso.
Ny olona iray izay mamaky be dia be dia afaka mianatra teny maro izay mbola tsy henony talohan'izay, ary tena mora ho an'ireo mpiteny zanatany ny manonona teny diso. 'Echelon' io teny io fa tsy Echelon. Saingy vinavina tsara ny fizaran-taona.
Satria ny CH dia azo tononina hoe K na CH na SH. Amin'ity tranga ity dia ny feony SH fa tsy ny feon'ny K. Nefa tsy afaka milaza avy amin'ilay teny fotsiny ianao.
Ka ny teny voalohany anio dia ny
Echelon. Echelon. Andramo izany amiko.
Echelon. Raha ny tokony ho izy, raha manontany tena ianao hoe inona ny afon'ireto tandindona ireto, ireo no tandindon'ny abidia fonetika iraisam-pirenena. Izy ireo dia mifanitsy amin'ny feon'ny anglisy satria ny litera anglisy dia tsy mifanaraka.
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba azy ianao, raha te hianatra azy amin'ny teny anglisy amerikanina ianao dia hanampy rohy mankamin'ny lisitra filalaovako izay lalovany eto ambany. Andriamanitra ô ry zalahy. Nandeha tany Youglish aho mba hizaha raha mahita olona miteny 'Echelon' aho.
Niditra an-tsoratra azy aho ary nahita bandy hafa nanadino ity teny ity tamin'ny fomba hafa. Tsy nampoiziko ny hahita an'io. Ka hoy izy hoe 'Echelon' miaraka amin'ny feon'ny CH, vinavina ihany koa fa tsy ny fomba fanonona ilay teny.
Ka io fanononana io dia tsy misy afa-tsy fanononana iray ao amin'ny rakibolana ary Echelon no anarany. Echelon. Raha tsy mahazatra anao ny teny hoe echelon, dia midika hoe vondrona na ambaratonga ao anatin'ny fikambanana na vondrona lehibe kokoa izy io.
Niresaka tamin'i David momba ny Opera Metropolitan aho. Nilaza aho fa milay be ny miaina akaikin'ny trano opera kilasy ambony. Ny fandrenesana ny fanononana diso an'i Echelon tao amin'ny Netflix dia nahatonga ahy hieritreritra ireo teny diso notononiko teo amin'ny fiainako.
Ka nandefa tao amin'ny Facebook aho mba hanontany ny namako momba ny teny diso nolazain'izy ireo na tsy azoko antoka ny fomba hitenenany angamba satria nianatra azy ireo tamin'ny famakiana izy ireo. Nisy namana nilaza fa 'korontana'. Nihevitra izy fa korontana izany, mitabataba CH ny taratasy CH.
Mety ho sarotra koa ireo litera CH ireo, toy ny any Echelon ihany. Ka eto izahay dia mandinika lisitry ny teny izay diso nanononako tamin'ny fitenin-drazana. Ny tenako diso nanonona azy na ny namako no nanaiky fa diso ny nanambarako azy.
Ity dia avy amin'ny namako Lowell, izay namaky mafy tao an-dakilasy tamin'ny kilasy faha-6, hoy izy 'fandaharam-potoana'. Ok, ka nafangarony ny L sy ny D ary tsy nanao feo K koa izy. sk, sk.
Fandaharam-potoana. Fandaharam-potoana. Ka matetika ny SK dia miampy K feo K, toy ny any an-tsekoly.
Fa tsy voatery foana, ohatra, raha manaraka consonant hafa dia ho feo SH toa ny: drag. Schlep dia manana heviny roa: mijanona na mitondra zavatra. Tsy maintsy misintona ny fivarotako entana amin'ny rihana efatra aho.
Na mety ho dia lavitra na sarotra. Mila adiny iray aho vao afaka miasa eo amin'ny metro ary mila manova fiaran-dalamby indroa aho ka misintona. Izany no teny nangatahin'ireo mpianatro imbetsaka.
Ka manana lahatsoratra manazava ny fomba fanononana an-tsipiriany ity teny ity aho. Hampifandraisiko amin'ny farany izany na ho hitanao ny rohy amin'ilay famaritana ny lahatsoratra. Eto aho dia nahita iray fa na ilay bandy ao amin'ny diksionera aza diso hevitra.
Acai io. Azoko tsara izao. Rehefa tonga amintsika ny teny avy amin'ny fiteny hafa dia mety ho mafy tokoa, fa tongava.
Izany dia soratana miaraka amin'ny fanamafisana ny vaninteny farany. Acai fa tsy acai. Fantatrao ve izany? Voaroy iray izay heverina ho tena tsara ho anao.
Matetika apetraka amin'ny malama. Ary eny, efa henoko tokoa ny Amerikanina nanonona an'io acai io. Ny tiako holazaina dia miaraka amin'ny litera, ity fanononana ity dia mety amin'ny teny anglisy.
Fa acai io, ity manaraka ity izay efa nolazaiko diso mihitsy teo aloha. Tahaka an'i Lowell miaraka amin'ny fandaharam-potoana. Heveriko fa diso ny fanononantsika azy satria mifangaro ao anaty lohantsika ny sasany amin'ireo litera.
Heverinay fa voasoratra toy izao: ka hoy izahay, ratsy toetra. Fa tsy izay, fa: ratsy toetra. Tsy sarotra ny mahita ohatra amin'ny olona diso fanonona ity teny ity.
Nefa tadidio fa tsia tsy ity fa tsy mety izany. Syllables telo fotsiny io. Mamitaka.
Ratsy fanahy. Raha tsy fantatrao io teny io dia midika filalaovana izany, saingy mety misy zavatra ratsy. Ny zanako kely vaovao dia somary ratsy toetra, mihinana syllable fanampiny ny kiraroko.
Ny teny dia: triathlon. Eny, meloka aho tamin'ny famoahana diso ity teny ity. Hoy aho hoe Triath-uh-lon ary nanampy vaninteny fanampiny aorian'ny TH.
Triath-uh-Triath-uh-lon. Miloka aho raha manintona amerikana 10 farafaharatsiny ny antsasak'izy ireo dia hieritreritra fa tononina tahaka izany. Mety ho diso tsipelina ihany koa ianao, ary manampy fanampiny A.
Saingy tsy vanin-teny efatra, telo izy io. Tri-ath-lon. Triathlon.
Triathlon mihazakazaka, milomano, bisikileta ary mihazakazaka. Eny, ny iray manaraka dia ohatra iray tamin'ny fiainako manokana. Kilasy fahafolo aho, kilasy jeografia, tsy tadidiko izay nolazaiko, fa nampiasa ity teny ity aho: facade.
Fa tsy nilaza an'izany aho, hoy aho: facade. Barricade. Cascade.
Am-polotaona Nisy dikany ny Facade, saingy tsy izany no fanononana. Facade.
Ny C dia ny feony S, tsy fahita izany, fa amin'ny teny maro toa an'i Kreis sy Stadt. Facade. Manana namana roa aho izay nilaza fa tsy hainy ny manonona ireto teny roa ireto: manjavozavo sy lamaody. manjavozavo sy malaza.
Tsy azon'i Kirk antoka na ho manjavozavo na manjavozavo. Ary milaza izy fa mbola matahotra ny hilaza an'io, saingy toy ny andro ny AY, ndao hoe, AY. Vague no lalana aleha.
Ankehitriny. Niasa tamin'ny sehatry ny lamaody i Catherine ka azoko antoka fa fantany ny fomba hitenenana hoe Vogue. Nefa hitako fa ny U sy ny E amin'ny farany manao ity fanononana ity somary mikorontana.
Manjavozavo sy malaza. Ny zavatra manjavozavo dia zavatra tsy mazava, tsy voafaritra mazava, voalaza na nohazavaina. Miezaka ny manamboatra fanaka vitsivitsy aho, saingy manjavozavo ireo torolalana ireo.
Raha lamaody ny zavatra iray dia malaza na lamaody izany. Tsy mino aho fa niverina tamin'ny fomba ny fatorana volo. Raha miresaka momba ny UE amin'ny faran'ny teny iray, manjavozavo sy fomba firy, ahoana izany teny izany? Filaharana.
Toa litera be loatra izany, sa tsy izany? Nilaza ny nenitoako fa efa nandre fanonona isan-karazany an'io teny io izy ary tsy azony antoka ny fomba hitenenana azy, ka tsy maintsy notadiaviny. Noho izany, raha tsy mpandahateny teratany ianao ary mahatsapa ratsy ny tsy fahalalana ny fanononana ny teny iray rehefa mamaky azy dia aza manahy fa manana olana mitovy amin'izany ireo mpiteny vazimba. Ity teny ity dia: filaharana, toy ny fanononana mafy ny litera Q amin'ny feo avo.
Filaharana, izy io koa dia mitovy fanononana an'io teny io: cue. Ny filaharana dia andalana iray. Mijoroa mba hahazoana tapakila amin'ilay fampisehoana.
Cue dia famantarana. C-U-E. Ohatra, rehefa any an-tranon'olona ianao amin'ny hariva.
Ary mangovitra foana izy ireo, mety ho io no fodinao hody. Manana roa hafa miaraka amin'i QUE aho. Nilaza ny zaobaviko fa nieritreritra foana izy hoe 'taloha' io teny io.
Saingy tsy izany fa fahagola. Ary ny namako iray indray nandre olona nilaza ny teny hoe 'Boutique', fa tsia, butikety io. Toy izany koa ve ny teny rehetra mifarana amin'ny IQUE? Fahagola, bizina, fitsikerana, toe-batana, tokana? Tsia tsia.
Manana rindranasa sy mpampita hevitra ihany koa izahay, ka tsy mankatò an'io lalàna io daholo. Ny fahagola dia zavatra taloha, angamba tsy fahita firy, kalitao avo lenta izay ampiasaina hilazana ny fanaka amin'ny fotoana hafa. An'ny renibeko io birao fahagola io.
Ny Boutique iray dia mamaritra ny fivarotana kely sy lamaody. Ny trano fandraisam-bahiny iray, ohatra, dia tsy manana efitrano firy, ary ny efi-trano tsirairay dia tena haingo sy voaravaka tsara. Ny teninay manaraka dia ny asa-tanana.
Nilaza ny namako fa tsy maintsy nanitsy namana malina sy hendry izy indray mandeha izay nilaza hoe: artisanal. Mety ho sarotra ny adin-tsaina. Tsy dia misy fitsipika momba izany.
Ity teny ity dia misy fihenjanana amin'ny vaninteny faharoa. Artisanal. Ny zavatra 'vita tanana' dia zavatra vita tanana, matetika amin'ny fomba nentim-paharazana.
Mofo artisanaly. Fromazy artisanal. Zavatra vita tanana amin'ny andiany kely, tsy toy ny zavatra vita amin'ny ozinina.
Artisanal. Ny manaraka dia ny kognac. Hoy ny namako Emily, nolazaiko mafy tamin'ny fety iray izany ary nangina tanteraka ny efitrano.
Noheveriko fa ho tononina hoe Cogganack. Azoko tsara ny antony nieritreretany an'izany, jereo ireo litera. Cognac.
Saingy ny cognac, kocac, kocac dia marika avo lenta, manaraka dia: ny halaliny, misafotofoto ity teny ity satria toa tokony ho ny fanononana io teny io: hain-tany, izay tononina miaraka amin'ny OU toy ny haintany, ilay misy AU dia tononina keg. Ny labiera drafitra dia mahazatra satria ny labiera ao anaty keg dia antsoina hoe labiera vita amin'ny labiera, ary betsaka ny olona maniry ny misotro azy noho ny labiera anaty tavoahangy na kapoaka. Ny haintany miaraka amin'ny OU dia lava miaraka amin'ny orana kely na tsy misy.
Ary avy eo misy teny iray hafa toa ny drafitra nefa tsy mitovy ny tsipelina azy, DRAFT, izay midika zavatra izay tsy amin'ny endriny farany. Nanoratra drafitra voalohany tamin'ny asako aho. Volavola
Haintany. Drafitra. Ary inona izany teny izany? Kolonely, aiza ny R? Io ihany no teny amin'ny teny Anglisy azoko eritreretina fa manana feo R fa tsy misy litera R.
Ireo tarehin'ity teny ity dia tsy misy dikany amin'ny fomba fanononana azy. Nisy namako nilaza tamiko fa nanonona ny teny hoe 'Kolonely'. , mazava ho azy, misy dikany amin'ny fampisehoana any am-pianarana.
Heveriko fa betsaka ny olona manana izany tantara izany. Kolonely dia laharana amin'ny tafika. Kolonely.
Ary farany ka ilaintsika izao, tsy haiko mihitsy.
Worcestershire? Manana ny gorodona isika: Worcestershire. Hafahafa be izany teny izany. Tena niresaka izany tamin'ny lahatsoratra teo aloha aho.
Andao jerena. Ity dia iray amin'ireo tranga vitsivitsy izay itazonantsika ny adihevitra anglisy. Ity saosy ity dia natao voalohany tao amin'ny tanànan'ny Worcester England.
Shire dia mitovy amin'ny britanika amin'ireo faritanintsika eto Amerika, ka ity saosy ity dia nomena anarana fotsiny ho an'ny faritra niavian'io. Worcestershire, izay misy ny hoe 'shire' toa ny anaran'ny fanjakana New Hampshire. Noho izany dia avelantsika ny R voalohany ary ny zanatsoratra ao amin'io vanin-teny io dia ny UH toy ny ao amin'ny zanapeo fanosehana.
Wuh - wuh - ka ny molotra dia manomboka anaty boribory tery ary avy eo miala sasatra kely, fa mbola somary boribory ihany isika ho an'ilay zanatsoratra. Wuh - wuh-- izany no vanin-teny voasedra. Avy eo dia manana vaninteny roa tsy voageja isika.
Stershire - stershire - stershire - mba hahafahanao ho ambany sy haingana kokoa. Ka manana ny cluster consonant ST izahay, Worcest-- st-- st - noho izany ny nifinao dia tsy maintsy miaraka miaraka amin'ny feo S, ny lela dia hahatratra ny tampon'ny vava ho an'ny T. Worcestershire.
Ankehitriny ny vaninteny roa faharoa dia manana ny schwa, ka tsy mila valanoranony amin'izany isika. Worcestershire. Tershire.
Mba hampanakoako ny feon'ny SH eo anelanelan'ny feo UR roa dia mandroso kely ny lela, saingy ny tendron'ny lela dia mbola tsy mila mikasika na inona na inona, ary hijanona hiaraka ny nifinao, Shh, ary hitombo ny molotrao. Worcestershire. Kahefatra telo fotsiny no izy.
Da da da. Worcestershire. Aza tononina ny voalohany R ary alao antoka fa hametraka ny Schwa amin'ny vaninteny farany.
Ny olona sasany dia te-hiteny hoe Shire, fa sahala amin'ny New Hampshire State, shire, shire, dia Schwa amin'ity fampiasa farany ity. Inona avy ireo teny nolazainao diso na henonao diso fanonona azy? Soraty ao anaty hevitra. Eny, talohan'izay dia nampanantena anao aho rohy mankany amin'ilay teny hoe 'fandaharam-potoana'.
Tena nanana andiana antsoina hoe Word of the Week aho nandritra ny fotoana kelikely izay nanaovako lahatsoratra momba ny fomba fanonona teny iray izay nangatahan'ny olona iray tany. Karazan-teny tsara rehetra ho an'ireo miteny tsy tompon-tany. Hifandray amin'ity lisitra filalaovana ity aho eto.
Tiako ny mampianatra anao Anglisy, misaotra noho ny fahatongavanao eto miaraka amiko. Izay no izy, ary misaotra betsaka tamin'ny fampiasanao ny anglisy English.
Fa maninona no lafo be ny satroka fiaramanidina?
Misy vitsivitsylacrossempanamboatra fitaovana Tsy toy ny baolina kitra na basikety miaraka amina orinasa an'arivony mifaninana hanao vokatra,lacrossemanana mpanamboatra fitaovana vitsivitsy fotsiny. Midika izany fa afaka miakatra ireto orinasa iretoBebe kokoaho an'ny vokatra vokariny satria misytenaolona vitsy mahavitalacrosseFitaovana.12. 2020.
(mozika mampihetsi-po no milalao) (♫ Ary kitiho fotsiny aho mandra-pahazoako fahafaham-po) - Ity hira ity! - Ity hira ity - o, nanaikitra ny takolako fotsiny aho, izany no ratsy indrindra, noho izany ianao tsy VLOG miaraka amina siligaoma Miverina mihira segondra mba hahafahako miresaka. (Mitohy ny mozika) Eny, handeha hitsangatsangana isika anio. Momba ny soccer ity lahatsoratra ity.
Nahita ny lohateny ianao - Soccer! Tiako ny baolina kitra - tiany ny baolina kitra. Mila manazava kely isika, satria amin'izao dia handeha hitsangatsangana manokana any- Boston.- Boston.
Inona no halehantsika any? - Handinika ny lalao Tia Tanindrazana sy ny lalao Houston Texans isika. - Houston Texans, ekipa mpilalao baolina kitra izy ireo. Ligin'ny baolina kitra nasionaly.
New England Patriots, ekipa iray izay tena mampiady hevitra noho ny antony maro, satria efa tratra nisoloky izy ireo indraindray, nefa mandresy hatrany koa. Toy ny hoe izy ireo no tompon-daka. Ary rehefa eo an-tampon'ny tampon'ny trano ianao, dia mikapoka anao foana ny olona ary mitsikera anao.
Ka nanapa-kevitra izahay: andao gaga an'i Lincoln amin'ny lalao baolina kitra voalohany nataony, ny lalao NFL. Gaga! Nolazaiko azy omaly satria malahelo sy marary izy, ka nomeko zavatra hahafaly azy. Ka te-hanazava kely momba ny baolina kitra aho.
Misy zavatra vitsivitsy azoko lazaina aminao momba
Ny zavatra voalohany momba an'i Lincoln dia ny filalaovana baolina kitra, ary misy fotoana mahafinaritra azoko rehefa nopotehin'i Lincoln izany ary nahazo ny safidy fahenina aho. Firy ny lalao resintsika tamin'ity taona ity Lincoln? - Zero, 7-0 isika raha ny fahitako azy? - 7-0! Tsy maintsy mandresy isika anio zazakely Amin'ny firy no tianao ny lalao? - Dimy - Dimy? 4:43 hariva izao. - Manantena aho fa olona vitsivitsy farafaharatsiny ho eo - Eny, tsy dia betsaka ny olona.
Um andao isika hankany amin'ny tobin-tsolika ary hisotro zava-pisotro na hitsaboana na zavatra hafa aloha - tsara ve izany? Tsy tsara ho ahy io.- Tsy mety aminao izany? Ho an'ny sakafonao? - Eny - mila mihinana tsara kokoa ianao? Inona no ilainao? Ohatra hoe sakafo organika? - Mila mofomamy na lollipop aho.
Salama izany. - Oh, gotcha.- Gatorade? Eny.- Tiako ity karazana ity; Tena tsara - Karazan-karazany manao ahoana izy io? - Fanala fanala - Fanala fanala? Avy amin'ny glacier ve izy io? - Cherry glacier, tsy mangatsiaka Afaka mahazo siligaoma na fitsaboana kely ve aho? - Mety amin'ny lalao ve ity? - Ie.
Tsy maintsy mankany amin'ny trano fidiovana aho, azonao atao ve izany? - Rano, Gatorade: tsy misy zavatra tsara. Tsara izany, andao jerena eto ity tifitra ity. Tsara izany, Andriamatoa
Quarterback, Lincoln. Mitadiava pickaxe. Eo izy! (Faly ny ankizy sy ny ray aman-dreny) Ao izany! Misafidiana enina! Hoy fotsiny aho taminy: 'Makà enina.' Tsy haiko raha nanana tamin'ny fakantsary aho fa hoy aho hoe 'mahazoa enina' dia nihomehy ahy izy.
Na dia tsara jerena aza ilay sombin-javatra, dia misy zavatra mety tsy noraharahinao. Inona no mety tsy hitanao, Lincoln? - Nesorina tanteraka ny sainako satria tsy nesoriko izy ary naveriko tany amin'ny fiandohan'ny lalao. Nofehezin'izy ireo tanteraka ny tanany ary nivaha izy io satria tsy nisy nahazo. - Mahagaga ihany ny lalao, ny marina dia mpisoloky i Lincoln - mpisoloky i Lincoln - amin'ny baolina kitra Nahatafiditra azy tamin'ny ekipa NFL sasany izy ary nandresy.
Jereo ity. Manana saina tsy ara-dalàna ve izy? Hoy ny mpitsara, 'Tsy hiala ny sainanao.' - Tsy ny iray hafa? - Jereo ilay mpampiofana, hoy izy: 'Lincoln, ahoana ny sainanao eto?' 'Tsy hiala izy.' Aza manaitaitra azy loatra fa mpamitaka izy.
Namitaka izy. Tsy hivoaka ny saininy. (Hira mozika épic) (mihoby ny mpanatrika) Misy izany, heveriko fa tsy manao izay ataon'i Sean Duras isika, izahay no farany tsy tafiditra amin'ny fiaramanidina. (Mihomehy i Lincoln) Ataoko fa tokony ho ny farany io.
Angamba isika hanomboka fironana vaovao, hipetraka amin'ny fiaramanidina ary hiandry mandrakizay mba hivoahan'ny tsirairay. Mahafinaritra izany - Sahala amin'ny mahazo ny kilasy voalohany isika ary eo amin'ny seza roa eo aloha isika - Ary miandry 20 minitra - Eny - Ka tonga tany Minneapolis izahay, tsy maintsy mandeha any Boston izao, manana fotoana maharitra. Ka antenaiko fa mankafy an'ireto clip ireto ianao.
Tsy te hanao an'izany izy rehetra. Aza omena fotoana be loatra aminy. Na dia omeko fotoan-tsarotra aza izy, ary angamba homeko an'ity lahatsoratra ity lohateny hoe ny zanako lahy dia mpamitaka.
Satria heveriko fa mampihomehy izany. - Ie. - Tianao izany, milay miaraka aminy ve ianao? Malahelo an'ireo izay toa izany aho. 'Tsy afaka tianao ireo tia tanindrazana. '' Tsy afaka mankany amin'izy ireo ianao, tsy afaka manova ekipa fotsiny. ' College, sa tsy izany? - College.- Ary tianay ny baolina kitra eny amin'ny oniversite, ny baolina kitra rehetra tamin'ny herinandro lasa dia nahagaga tokoa.
Mety? - Nahafinaritra tokoa iny. - Mba hanehoana anao, andao hasehoko anao, izahay mianakavy manontolo, iray volana na roa teo ho eo izay fa dia nankany amin'ny BYU izahay. Ary nahita ny BYU nilalao baolina kitra, ary nahafinaritra izany, ary hitanay koa i Jenny, vadin'i Sean.
Na dia tsy mahalala na inona na inona momba ny baolina kitra i Sean, ny vadiny dia manana fianakaviana mahafinaritra izay tia baolina kitra. (Milalao mozika afovoany) - Mijery antsika i Green, koa manaova hetsika voajanahary. (Feo mikotrokotroka) (mihomehy) - Ew ry olona, ​​maharikoriko - Izany no sarimihetsika! Inona no jerentsika? -Ah, tsara izany miafina eo anoloan'ny masoandro izany, ary i Leslie dia mitazana eo anilan'ny tribonaly.- Miery amin'ny masoandro aho.- Ahoana no tianao ny lalao, tsara ve izany? Izaho irery no mijery ny lalao fianakavianay izao ara-bakiteny - Dave! (Mitendry tarika manao diabe) Dave! - Hey! Ramatoa, manao ahoana ny tongotrao aorian'izany? - Brutal - Niara-niresaka taminay tamin'ity kilalao ity izahay, ary avy eo nandeha tany ianao ary toy ny hoe: 'Tsia, izy io.' (Fidoboka am-po) - Tokony nijanona teto amin'ity lafiny ity aho. - Misy simba ve sa tsara be? - Gaga aho fa tsy namaky ampahany tapitrisa.
Maratra fotsiny aho ary fantatrareo, ny kitrokelin'ny tongotra tahaka izany. Fa nitsambikina fotsiny ilay lehilahy aho. (Milalao mozika afovoany) (mihoby ny mpanatrika) - Ataovy eo amin'ny tavanao ny tananao, # 56 manafika.
Fahalotoana manokana, miaraka amina tara tampoka, mifandray amin'ny lohan'ny quarterback mihetsiketsika, miaraka amina tanjona, ho fiarovana. Hamaranana ny fanadihadihana. - eto ny sakaizan'i Brett akaiky indrindra.
Faly mahita anao sakaiza. - Faly mahita anao. - Ratsy tarehy ny tarehy - Inona izany? “Tsy fantany izay ataony, ny mpitsara.
Misafotofoto be ianao izao - Miverena any amin'ny Footlocker! - Miverena any amin'ny Footlocker, hoy ilay tovolahy. Tokony ho tia mpankafy soccer ianao. Ity i Mattix - Salama - Manana fantsona YouTube izy ary vao avy naka sary anay tamin'ny fantsona YouTube -ny izy.
Lehilahy mahafinaritra! Ankafizo ny mijery ny lalao. - Ie, ianao koa. - Hihaona tsy ho ela, vady.
Handeha izahay handeha hitsangatsangana, tiako haseho ireo tovovavy manodidina ny kianja. Misy io lalambe io izay miakatra hatrany. Ka nieritreritra aho fa milay ny fampisehoana azy ireo - Ary tongasoa eto an-tsena indray izahay, BYU Cougars anay! - Tsara izany - tiako ity kianja ity, jereo ny tendrombohitra eo.
Jereo hoe iza no hitanay. - Salama! - Jenny sy Adley io. Vao nifoha izahay Adley, tsy mahalala fomba aho.
Eny ary, avelanay irery ianao. Miverina matory ianao, Adley. - Faly mahita anao. - Mahafinaritra ny mahita anao koa.
Tsia, Sean Duras eto. Tsy manao izany izy - tsy mpanafatra baolina kitra goavambe izy na dia, aza ny zava-nisy nahafinaritra dia nilalao baolina kitra izy tany amin'ny lisea. - Marina izany. - Mahitsy? (milalao mozika elektronika faly) Mahery setra ireo mpandahateny eto - Harvey Langi, mpitatitra baolina - Nahazo izany ve ianao? Henonao ve hoe iza ilay mpitatitra baolina? - Fonosin'i # 21, Curry Bailey Smith - Tena mafy be izany.- Tombony amin'ny iray Ao amin'ny sombin-kazo no ahazoantsika ny sombiny faharoa sy fahasivy.- Misy ireo mpandahateny fanamafisam-peo, eo indrindra! - .. inona no dikan'ny herinaratra aminao? - Tena mafy be izany. (mitohy ny mozika falifaly) - Fa maninona no mbola apetrakao amin'ny tavoahangin-drano ny fakantsary? - Nanandrana nanao prank ahy fotsiny i Lincoln ary nilaza ny fakantsary - tsy fantatro akory izay atao hoe prank.
Amin'ny ankapobeny, ao anaty fitoeram-pako izao ireo tavoahangin-dranonay roa ireo, ary i Lincoln dia ao amin'ny efitrano fivoriana taorian'ny nivoahako avy tao amin'ny trano fidiovana. Eny, ity ny hotely misy antsika. - Eny, suite io! - Manana efitrano fivoriana izahay! - Avelao aho hijery ny efitrano, toa an'io suite manokana io - Andraso, avelao aho hiaraka aminao.
Voalohany indrindra, ny laharan'ny efitranonay dia 534 ary misy zana-tsipìka, - Tahaka ny fanary fambara - ary antsika irery io. 534. Mahazo ny isantsika manokana isika amin'ity sy ity ary lazao, lazao, inona izany? - The Orient Heights Suite - Inona ilay Orient? - Akondro - Tena tsy fantany fa nanontany ahy izy hoe: 'Inona no atao hoe Atsinanana?' amin'ireo toerana rehetra ireo.
Ary mbola tsy fantany hoe inona ilay Tatsinanana - inona? Inona izany? - Io ilay - Tsy haiko ny famaritana marina. - Marina indrindra. - Fa fantatro fa toy ny Azia, Sina
Vao avy nahavita ny baolina kitra BYU ianao dia nahazo ny hotely aseho eto amin'ny B oston izahay. Mamatonalina - andraso, zavatra baolina kitra BYU? - Ie, nasehoko azy ireo ny baolina kitra BYU - aiza? - Ny VLOG. Nasehonay anao fa mpisoloky ianao - Eny.
Ary avy eo dia nasehonay ny fomba handehanantsika amin'ny lalao baolina kitra BYU. Mandeha amin'ny lalao isika rahampitso, manao zavatra mahatsikaiky rahampitso maraina. Tsy haiko hoe inona izany, fa ho zavatra mahafinaritra izany - Yup! (mimonomonona) - Afaka mahazaka rajako kely aho - Andao hojerentsika. (Mihomehy i Lincoln) - Hitanao ve? Efa naratra izy.
Mora maratra izy. - Notapohinao ny rantsan-tanako. - Andraso, tsy maintsy hamaranantsika ity, tena mankaleo be ity. - Tsia, mila maka anao aho. - Tena mankaleo be izany.
Ok ry zalahy, ka rahampitso no andro lehibe. Manantena aho fa nankafizinao tamin'ny andro baolina kitra. Handeha hatory isika.
Reraka be ity lehilahy ity. - Ahhh!
Impiry ianao no tokony hanana aroloha lacrosse vaovao?
fiarovan-dohaCERTIFICATION SY NY FIKAMBANANA
Raha afiarovan-dohambola tsy voamarina isan-taona, ary efa antitra 3 taona izy io, tsy voamarina intsony. Ny orinasam-panamarinana fanamarinana nahazo alalana dia afaka manamarina izany indrayfiarovan-dohaamin'ny fotoana rehetra hatramin'ny 10 taona hatramin'ny daty nanamboarana nyfiarovan-doha.
Tongasoa eto amin'ny herinandro faharoa amin'ny vlog MLL-ko. Mahatsiravina ny andro tamin'ity herinandro ity. Anontanio i Paul fa maninona ianao no mankafy manao an'ity vlog MLL isan-kerinandro ity? Valiny: Misy roa amin'izy ireo.
Voalohany, tiako ny hitazomana ny rehetra ao amin'ny New York Lizards sy ny Major League Lacrosse. Zava-dehibe izany sy ireo mpiara-miasa amiko, ary heveriko fa tokony ho anao izy io - ny fizarana lacrosse matihanina miaraka aminao no manasongadina indrindra amin'ny fahavaratra. Ka ny herinandro voalohany dia nifanandrina tamin'ny Chesapeake Bay Hawks any Annapolis.
Ny lalao voalohany amin'ny taona amin'ity ligy ity dia zava-dehibe sy eny amin'ny habakabaka foana satria fantatrao fa ny tovolahy dia avy amin'ny toerana rehetra. Vao telo herinandro izahay no niaraka niofana, ka isaky ny mandresy amin'ny herinandro voalohany dia tsara. Ie.
Izay nolazainy. Ho an'ny anio, maro aminareo no nanamarika tamin'ny vlog tamin'ny herinandro lasa, herinandro voalohany, fa hadinoko ny nanome ilay Rabil 2 izay nampanantenain'i #AskPaul ny zoma teo, ka aleo ataontsika eo noho eo. Ary ity no mpandresy: Boom, eo indrindra i Congrats George, tsara handeha.
Anareo izao. Fifanarahana Andrew, ho azony ho anao izany. Ho anao izay any ivelany manontany tena hoe ahoana no nandresen'i George, eny, misy antony telo.
Izany dia mihoatra ny fahazoan'ny ankamaroan'ny olona, ​​indraindray tsy mahazo iray ianao ary indraindray mahazo iray fa sivy. Laharana fahatelo: Nilaza i George fa izy irery no mpilalao any Georgia izay milalao lacrosse, amin'ny fanamarihana nataony, koa antenaina fa afaka hijanona miaraka amin'ny namanao iray ianao izao rehefa mampiasa ny Rabil 2, noho izany dia manana mpilalao faharoa any Georgia ianao milalao miaraka.
Misy an'i George ary rehefa miray amin'ny pejiko misy ny hevitro ianao tamin'ny herinandro lasa, ho hitanao fa satria adinoko ny nanome an'io dia nilaza aho fa te hanome segondra iray monja, saingy ny faran'ny sarimihetsika ihany no fomba handresena. jereo ny lahatsoratra. Ka hiverina izahay. Miresaka loha lacrosse.
Fantatrao fa mampiasa Rabil 2 aho, loha inona no ampiasainao ary loha inona no tadiavinao? Tadidiko fa ny loha plastika rehetra dia toy ny boaty. Izy ireo dia malalaka sy lehibe ary izahay no mandray azy ireo ary mamolavola azy ireo. Ahoana no hataontsika? Atsipintsika ao anaty lafaoro izy ireo ary mahandro azy ireo.
Eny, hanadio ny lohantsika isika. Raha ny marina. Ie, heveriko fa mety ho hevitra tsara ho an'ity vlog ity.
Hanendasa lohana loaka aho ary hampianatra anao ny fomba hanaovana izany. Lasa izao. Alohan'ny hanombohan'ny Chef Boyarabil dia heveriko fa ilaina ny milaza aminao ny mahasamihafa azy, hoy, Rabil 2 High School Spec, ala.
Tsara bika ny loha. Ary
Izay nampiasainay taloha. Izay tsy voatery ho endrika loha ratsy tarehy, fa malalaka kokoa. ny fomba fanaovana azy. tiako ho toy izao ity lohany ity.
Ahh, mafy izany. Mazava ho azy, anaka, alohan'ny handrehantsika io fatana io, alao antoka fa manatona plastika sy hafanana ao an-trano ny dokotera sy / na ny ray aman-dreninao na ny mpiambina anao, e eny, ataovy fotsiny.
Ka dingana voalohany: apetraho amin'ny 300 ny lafaoro, eo am-piandrasana ny hafanan'ny lafaoro, Brad, tsy ela dia tsy nanana lakozia Rabil izahay. Ary na dia tsy hihinana ny Edge Rabil 2Cue aza izahay. Akora ilaina: Loha plastika tsy voatsatoka, vonona hamboarina.
Avy eo dia mila na mpitifitra ianao na nylona, ​​ny olona sasany mampiasa fehikibo. Natao inona ireo? Rehefa mivoaka avy ao anaty lafaoro ny loha dia tsara tarehy ianao ary mafana sy bobongolo, tsy bobongolo izany, sa tsy izany? Toy ny malefaka ihany izy io, mila zavatra hamehezana ny plastika ianao mba hahafahanao manaingo ny lohanao Ary farany, fonon-tànana fandrahoan-tsakafo, fonon-tànana vita amin'ny lafaoro ary toe-tsaina manao zavatra ataontsika eto. Ireo no fako mamaky laoka.
Eny ary, mahatratra 300 isika avelao handeha ity zavatra ity. Atsipazo ao izany.
Dimy minitra. Telo minitra, raha ny marina. * Zavatra * Tapitra ny fotoana.
Mamono ny lohantsika isika. Eto no mitranga ny majia. Manomboka eo aoriana isika.
Hametahana ireo sisin-dalana eto ianao, manomboka eo an-tampony. Hiezaka hahazo fantsona somary tery kokoa izahay. Misy ny fizarana 1.
Fizarana 2 Andao handeha. Hafa hafa kely io endrika io Raiso eto. Fantaro raha toy izany no itiavantsika azy.
Ampitahao amin'ny manaraka ireto roa ireto. Ka tsy maintsy ho avy. Ary akaiky izahay.
Ny ampahany mora izao. Raisinao ity vokatra ity ary atsipazo ao anaty vata fampangatsiahana izany. Dimy minitra na latsaka Fito minitra.
Tapitra ny fotoana ary eny, tokony hahatsapa ho mangatsiatsiaka kely ny loha, midika izany fa vita izany. Ary miroborobo! Fantatrao, manana endrika sisin'ny tsara ianao. Tsy Rabil 2 tena izy io, saingy mino aho fa misy G's ao aminy.
Smart. Nijanona teto ianao ary omeko ity Rabil faharoa ity 2. Ity no fomba handresenao.
Roa: hevitra eto ambany izay lohanao ampiasainao. Hanambara ny mpandresy aho amin'ny fanehoan-kevitra momba ny hevitrao.
Avy eo omeo mailaka Andrews raha tsy izany dia hifandray aminao roa izy.
Tokony hividy aroloha lacrosse efa niasa ve aho?
Helmona Lacrosse efa niasa: Raha tsy mila ekipa manokana ny zanakao lahyfiarovan-doha, hevitra tsara nymividiana aroloha lacrosse efa niasa. Misy ny tanora sy ny olon-dehibefiarovan-doha, ka alao antoka fa mahazo ny mety ianao.Lacrosse efa niasaGoalie Gear: Amin'ny ankapobeny ny tanjona dia manana olana betsaka kokoa noho ny mpilalao hafa mahita ny fitaovana mety.16.06.2020
Ahoana no hisafidianana fiarovan-doha lacrosse?
nyfiarovan-doha lacrossetokony hipetaka eo an-dohanao. Ny firakofana nyfiarovan-dohatokony hanome fanerena mafy orina mihitsy aza. Tokony hanana tery tery izy io, saingy tsy tonga amin'ny fotoana izay miteraka tsy fahazoana aina. Mba hahazoana antoka fa nyfiarovan-dohamifanaraka tsara, andramo izany amin'ny alàlan'ny famindrana azy mandroso sy miverina amin'ny lohanao.
Fanatanjahan-tena ve ny lacrosse?
Lacrossevavahadymanan-karenaOLONAfanatanjahan-tena. Natao amin'ny kianja Ole 'mahazatra izy io, lafo ny fitaovana, saingy tsy mihoatra ny fitaovam-baolina na baseball baseball lafo vidy, fa noho ny antony sasany, dia ny ofisialyfanatanjahan-tenany zaza fotsy manan-kaja izay tsy te hoheverina ho zaza fotsy manan-kaja (fa mbola manao izany).
Fanatanjahantena lafo vidy ve ny lacrosse?
Lacrossedia tenafanatanjahan-tena lafo vidymilalao, ary ny faritra mafana amin'ny Lax toa an'i Long Island dia fantatry ny mpanankarena. Ny marina dia nyfanatanjahan-tenadia lalaovina any amin'ny ankamaroan'ny lisea ary miampita ny toekarena. Ny ankamaroan'ny ekipa klioba aza dia manolotra fanampiana handoavana ny vidin'ny fitaovana, ka ahafahan'ny tsirairay milalao.
Mitovy ve ny lamba lacrosse sy hockey?
Lacrosse-tsoronyfisaka sy mivelatramitovymatoanteny-tsoronyfisaka sy mivelatra(matoantenyazo ampiasaina ny kinova ary mety tsara ho an'ny mpilalao vaovao) ary maivana kokoa noho ny baolina kitrafisaka sy mivelatra. Tokony hifanaraka tsara izy ireo, manarona ny soroka. Arm & Elbowfisaka sy mivelatra- Fampitana sandry aolacrossedia mitovy amin'nymatoantenymisy fahasamihafana lehibe iray.
Mandra-pahoviana ny lalao lacrosse?
Ny halavan'nyTapaka ny
Ny fotoana voafetra ho an'ny oniversite ho an'ny lehilahyTapaka nydia 60 minitra, mizara fizarana efatra isaky ny 15 minitra. Raha misy fatorana amin'nytapitranyTapaka ny, ekipa manana fandresena tampoka. Ireo ekipa dia milalao fe-potoana efatra minitra tsirairay mandra-pahafaty ny tanjona.
Iza no fiarovan-doha lacrosse tsara indrindra vidina?
Ny fananganana ny Cascade CPX-R Helmet dia manambatra rafitra saoka, visor ary sarontava mba hanomezana tsipika lehibe sy fahitana tsaratsara kokoa ilaina hanitsiana ny lalao rehetra.
Ahoana no hiarovan'ny fiarovan-doha lacrosse ny lohanao?
Saingy mbola hiaro ny lohanao izany, izay zava-dehibe indrindra. Etsy ivelan'ny fiarovan-doha dia misy akorandriaka ABS mitovy aminy izay natao mba hampihenana ny fanoherana ny rivotra sy hitahirizana ny lohanao. Nahazo ny rafitra fitoviana SPR mitovy amin'ny Cascade CPX-R, izay iray amin'ireo antony lehibe itiavantsika azy indrindra.
Mila mpiaro tenda amin'ny lacrosse ve ianao?
Ny fomba tokana hanaovana an'io dia amin'ny fiarovan-doha lacrosse avo lenta. Raha mpiandry tsatokazo ianao dia zava-dehibe kokoa ny fiarovana. Hamarino tsara fa manampy mpiaro tenda amin'ny fiarovan-doha lacrosse ianao. Ny fenitra volamena amin'ny fanombanana ny kalitaon'ny fiarovan-doha lacrosse dia ny Komitim-pirenena misahana ny fenitra ho an'ny fitaovana fanatanjahantena.